February 2015 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
SMALLVILLE SEASON 1 (2001)ဇာတ်ကား
မင်္ဂလာပါ ဇာတ်ကားကောင်းကြိုက်ပြီးမရှာတက်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက် SMALLVILLE SEASON 1 (2001)ဇာတ်ကား လေးကို အပိုင်း (၁၀) ပိုင်းထိရှိပါတယ် အင်္ဂလိပ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:39:00 No comments:
Labels: အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဇာတ်ကားကောင်းများ
The Lord Of The Rings;The Two Towers (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
လူကြိုက်များပြီးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကားလေးပါ အခု ဒုတိယကားကိုဆက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမကားဖြစ်တဲ့ The Lord of the Rings: The ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:27:00 No comments:
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုး ဇာတ်ကားများ
လူကြိုက်များပြီးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကားလေးပါ အခု ဒုတိယကားကိုဆက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမကားဖြစ်တဲ့ The Lord of the ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:21:00 No comments:
The Lord of the Rings;The Return of the King (2003)မြန်မာစာတန်းထိုး
လူကြိုက်များပြီးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကားပါ အခု ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမကားဖြစ်တဲ့ The Lord of the Rings: The Fellowshi...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:15:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ photoshop လေ့လာနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် နည်းနည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ ကျွန်တော် အချိန်မရတာနဲ့ video ဖိုင်လေးကိုပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် video...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 11:17:00 No comments:
Xara Web Designer Premium v9.2.3.29638 [x86-x64] Incl Crack
မင်္ဂလာပါ Magic Software ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Xara Web Designer Premium ကိုအသစ်ပြန်တင် လိုက်ပါတယ်။အရင်တင်ပေးခဲ့ဘူးပေမဲ့ Link သေနေတဲ့အတွက် အခုထပ်တ...
Magic Camera 8.8.0 Incl Key
မင်္ဂလာပါ Online Chat Apps များအတွက် Webcam ဆော့ဝဲလေးပါ။MSN Messenger, Yahoo! Messenger,PalTalk, Skype, AIM, ICQ, Camfrog,...စတဲ့ Chat ဆော့ဝဲ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 19:15:00 No comments:
Labels: Webcam (ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ Video chat လုပ်ဘို့ Windows အတွက် Web Camera ဆော့ဝဲလေး တခုပါ။Effect ပေါင်း များစွာပါဝင်ပြီး ဗီဒီယို Chat လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပုံကို ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 19:05:00 No comments:
SCRAP, FLORES, MARIPOSAS, PRIMAVERA PNG
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် PNG ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလိုတာယူန...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:08:00 No comments:
WALLPAPER, BACKGROUND, PRIMAVERA JPG
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် BACKGROUND ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလိ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:03:00 No comments:
MARCOS PARA CUMPLEAÑOS PNG, BUENA CALIDAD
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် PNG ဘောင်ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလို...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 02:43:00 No comments:
AGUA, OLAS, PNG,
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:57:00 1 comment:
BODA SCRAP, PNG, Part. 1
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 00:11:00 No comments:
BODA, SCRAP PNG, Part. 2
MARCOS PNG DIA DEL PADRE, FATHER'S DAY
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် PNG ဘောင် ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလိ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:42:00 1 comment:
COLLARES Y ARETES, PNG,
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:33:00 No comments:
SCRAP LILA Y VERDE , PNG,
ACCESORIOS PARA CUARTO DE NIñO, PNG Y JPG
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် PNG ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလိုတာယူ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:06:00 No comments:
ALFOMBRA ROJA, ESCENARIOS
မင်္ဂလာပါ photoshop အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် background ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အောက်မှာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး save image as လုပ်ပြီးလ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:01:00 No comments:
SCRAP ABRIL, FLORES GUSANOS PNG, ETC
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:52:00 No comments:
Wndows 8.1 Ubuntu Edition X64 2015
08/02/2015 နေ့ထွက် DiLshad Sys မှ Modify လုပ်ပေးထားတဲ့ အလန်း လေးတခုဖြစ်တဲ့ Wndows 8.1 Ubuntu Edition X64 2015 ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။x86(32-b...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:45:00 No comments:
AVG Internet Security Free 2015.0.5557
မင်္ဂလာပါ AVG Internet Security 2015ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုင်စင်သက်တမ်း(3) နှစ်သုံးနိုင်ရန် key လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ window 64 32 နှစ်ခုစ...
Xara Web Designer Premium v9.2.3.29638 [x86-x64] I...
MARCOS PARA PHOTOSHOP, MARCOS PNG DE BUENA CALIDAD...
Sony Acid Music Studio v10 (Build99) Cracked-Trace...
Leawo Total Media Converter Ultimate 6.2.0.0 + Cra...
Aimersoft DVD Creator 3.0.0.8 + Crack [KaranPC]
eBook Converter Bundle 2.8.109.348 + Patch
CoolUtils Total Image Converter 5.1.32 Multilangua...
CoolMedia Audio & Multimedia Software Suite (04.02...
Bigasoft Total Video Converter v4.3.5.5344
AVCWare Video Converter Ultimate 7.7.3 Build 20131...
AusLogics BoostSpeed Premium v7.4.0.0 + Lifetime K...
Advanced SystemCare PRO v8.0.3.588 Final RePack.58...
CCleaner 4.19.4867 + All Edition Crack Final.4867 ...
Clean Space 2014.05 + Crack
RAM Saver Professional 14.0 Multilingual + Key
Windows7Manager 4.4.9 + Crack
Wise Care 365 PRO v3.25 Build 285 Multilingual
Windows Doctor 2.7.9 (Crack) PreActivated (7.01 Mb...
Windows7Black Ultimate x64-29-01-10-2015
CCleaner 5.01.5075 + All Edition Crack.5075 + All ...
CCleaner v5.0.5035 (BETA) With Business + Professi...
Glary Utilities PRO v5.17.0.30 Multilingual
All Trapcode products FREE for AE & PP CS5, CS5.5,...